चिकित्सकको गुनासो : हामीलाई घोषणा गरेको भत्ता खोइ ? - kageshworikhabar.com
चिकित्सकको गुनासो : हामीलाई घोषणा गरेको भत्ता खोइ ?
१६ जेष्ठ, जाजरकोट । सरकार आफैँले घोषण गरेको तलबभत्ता नपाएको भन्दै डोल्पा र जाजरकोटका चिकित्सकले गुनासो गरेका छन् । जिल्ला अस्पताल डोल्पामा कार्यरत चिकित्सकहरूले कोरोना सङ्क्रमितको कुनै पनि उपचार र सेवा नगर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
Previous articleबेलायतका प्रधानमन्त्रीले आफूभन्दा २३ वर्ष कान्छी प्रेमिकासँग ‘गुपचुप’ विवाह गरे
Next articleग्राण्डीमा एकपटकमा ९६ जनाको परीक्षण गर्न मिल्ने पिसिआर परीक्षण ल्याब सञ्चालन